Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere Ele Galasia 3
Iwu mọbu ọkwnata
1 Anụ ele Galasia iwhnirniwhno, nyele kpahieru anụ anya? Nụ ruwhnu anụ bụ hne me gesiri anụ nụ be kpọgburu Jizọsi Karaịsi n'ọgba. 2 M pioru m ọ mahịa otu nhne n'aka anụ. Anụ nahịaru Enine Nsọ hite n'ome nhne iwu kwuru, sọbu hite n'okweru nhne anụ nụrnu? 3 Anụ bụ ele iwhnirniwhno kpa? Anụ panịzoru n'Enine ke Chiokike, anụ naagbalị o wu bụdnu kịtna hite nụ rikne ke aka anụ? 4 Kpakara awhnụwhnu anụ tarụ ọ bụ nhne etekne? N'ezi, ọ bụ kwnornu nụ nhne etekne? 5 Chiokike nyernu anụ Enine a, rnụ ẹrnu ndu-ẹhni n'esilawụru anụ. Ọ bụ kwnornu nụ anụ mernu nhne iwu kwuru sọbu nụ anụ kweru nhne anụ nụrnu? 6 Lele kpa Ebereham “kweruru Chiokike, Chiokike gwnụsinu a nụ ọ bụ nye mee mma.” 7 Anụ mahịa nụ kpakara ele nwernu ọkwnata mkpọma bụ rụmu Ebereham. 8 Ọkwukwo nsọ kwuru nụ hne zị nụ ruwhnu nụ Chiokike jeeme ma ya nụ ele bụ́o ele Ju zịri n'udno hite n'ọkwnata mkpọma, znirni Ebereham izi ọma, kaa, “Hite nụ rime i, m jọogozi kpakara mba ke ọwa.” 9 A whnụrnu nụ Chiokike nọogozi kpakara ele ke jeekweru lele kpa Chiokike gọziri Ebereham, nye kweru nụ ya.
10 Ọvu ọnu zịnu kpakara ele neeche nụ Chiokike jọogwnu be lele ele ikpe mána kwnornu nụ be naabịta Iwu. Be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, kaa, “Ọvu ọnu zịnu kpakara ele zá naabịta kpakara nhne be gbarụ n'Iwu, neeme masị be.” 11 O dnornu aị anya nụ ọ zá nye ya nụ Chiokike zị n'udno hite n'Iwu, kwnornu nụ ọkwukwo nsọ kwuru, “Nye mee mma jeehi n'ọkwnata mkpọma a zịri bụdnu.” 12 Kọvu Iwu knóge aka n'ọkwnata mkpọma, lele kpa ọkwukwo nsọ kwuru, “Nye neeme kpakara nhne ka jaazị bụdnu nụ rime be.” 13 Karaịsi gbahịaru aị hite n'aka ọvu ọnu ke iwu, ọ ghọnu aị ọvu ọnu. Ọkwukwo nsọ kwuru, “Be vụru nye ọbula be kpọkwnusiri n'olu isisi ọnu.” 14 Karaịsi mernu ka ma ngọzi wam Chiokike kweru Ebereham mkwna bụru ke ele bụ́o ele Ju hite nụ Karaịsi Jizọsi, ma a hite n'ọkwnata mkpọma nahọru mkwna Enine Chiokike.
Iwu nụ mkwna
15 Rụmu nda m, m jeeji nhne anya nọowhnu noogbu esni. Ọ zá nye nwernu rikne o lulu njọ-ẹhni badnụ lawụru gbarụ, mọbu tụkwasi nhne n'olu a. 16 Kịtna, Chiokike kweru Ebereham nụ nnwọ a mkwna wam. Ọkwukwo nsọ kwúge agịda rụmu, kọvu “nnwọ ị,” ke bụ otu badnụ, nye bụ Karaịsi. 17 Nhne me nookwu bụ ka, iwu wam ke be nyernu riwhu awha ẹno nụ nri ẹto kpa mkwna Chiokike kweru Ebereham whemernu, nwée rikne lulu mkwna Chiokike kweru mọbu mee a ọ gharụ ọ zị ire. 18 Kwnornu nụ ọ bụru nụ nhne okehịa ka kno aka n'iwu, ọ bụ́ma mkwna, kọvu Chiokike kwnornu n'oru a, o nyernu a Ebereham hite nụ mkwna.
19 Kịni bụ nhne be kwno nyee iwu? Be nyernu a kwnornu ọdnahie ke badnụ tem dụ nga Nnwọ wam jaava bụ nye mkwna wam nọotu aka. Chiokike nyernu iwu hite n'aka ele enine izi, o nyee a nye ibno. 20 Nye ibno zá mkpa hne otu badnụ zị, Chiokike bụ otu.
21 Ka o neegesi nụ iwu megidnernu mkwna Chiokike? Ọ́za rịa rịa! Kwnornu nụ ọ bụru nụ be nyernu iwu ke jeenye bụdnu, ome mma jọoburu hite n'iwu. 22 Kọvu ọkwukwo nsọ kwuru nụ kpakara ọwa bụ ọhi mmehie, ma nhne Chiokike kweru mkwna o nyee hite n'ọkwnata mkpọma nụ Jizọsi Karaịsi bụru ke ele kweru ekwe.
23 Tụtu sụ ọkwnata mkpọma varụ, a bụ ele ikelu ke iwu, be gbagidnernu aị ọnuhna dụ nga be kpumernu ọkwnata mkpọma. 24 Iwu wam bụ nye neelegidne aị anya, kwuru aị vakwnusi Karaịsi, ma aị nụ Chiokike zịri n'udno hite n'ọkwnata mkpọma. 25 Kpa ọkwnata mkpọma varụ, a zị́ma nụ mkpururu nye neelegidne aị anya, ke bụ iwu.
A bụ rụmu Chiokike
26 Kpakara anụ bụ rụmu Chiokike hite n'ọkwnata mkpọma nụ Karaịsi Jizọsi. 27 Kpakara anụ ele be wụru mini bna nụ Karaịsi jooworu bụdnu ikne Karaịsi lele iwo. 28 Ọ zá nhne zị ichne nụ hne nye Ju nụ nye Giriki zị, mọbu hne ọhi nụ nye bụ́o ọhi zị, mọbu hne nyerukna nụ nyerinya zị. Kpakara anụ bụ otu nụ rime Karaịsi Jizọsi. 29 Ọ bụru nụ anụ bụ ele Karaịsi, anụ bụ rụmu Ebereham, ele jeekehịa mkwna wam Chiokike kweru Ebereham.